အိမ်ဆောက်နေတုန်း အုတ်နီခဲ တောင်းရင် မပေးလိုက်ပါနဲ့ ..
November 13, 2019 KhitthitMyanmar ဗဟုသုတ 0
ကျွန်တော့်ကားပျက်သွားလို့ ကားပြင်ဖို့ ဝပ်ရှော့ကို ပို့ထားလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် မြို့ပတ်ရထားစီးပြီး အလုပ်သွားဖို့ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ဘူတာရုံကို လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်။
ဘူတာရောက်တော့ ရထားလာဖို့ စောင့်နေတုန်း ဘူတာရုံပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ ခွက်လေးတစ်လုံး ရှေ့ချပြီး ငုတ်တုပ်လေး ထိုင်နေတဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ် လူကြီးတစ်ယောက်ကို သတိထားမိလိုက်တယ်။ သူဟာ အဝတ်အစား နွမ်းနွမ်းပါးပါးကို ဝတ်ထားတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ ထမင်းအလွန်ဆာနေပုံ ပေါ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရုပ်ရည်ဟာ သန့်ပြန့်လို့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တွက်မိတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို သနားတာနဲ့ ဘူတာရုံဘေးက ထမင်းတစ်ထုတ်ဝယ်ပြီး သူ့ဆီ သွားပေးလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရထားဝင်လာလို့ သူ့ကို စကားမပြောနိုင်ဘဲ လက်ထဲက ထမင်းထုတ်ကို ပေးပြီး ရထားပေါ် အမြန်တက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူဟာ ကျွန်တော့်ကို အလွန်ကျေးဇူးတင်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ လှမ်းကြည့်နေတာကို မြင်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အကြောင်းကို စဉ်းစားရင်း ညက တော်တော်နဲ့ အိပ်မရဘူး။
ဒီလူဟာ သူတောင်းစား မဟုတ်နိုင်ဘူး။ သူ့ရုပ်ရည်ကြည့်ရတာ အရင်က ချမ်းသာခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ သူ အခု ဘာကြောင့် တောင်းစားနေရတာလဲဆိုတာကို သိချင်နေတယ်
နောက်နေ့မှာ ကျွန်တော်ဟာ ပုံမှန်အလုပ်သွားချိန်ထက်စောပြီး အိမ်က ထွက်ခဲ့တယ်။ အရင်နေ့က တွေ့ခဲ့တဲ့ အဲဒီလူကြီးနဲ့ စကားပြောချင်လို့ပါ။ သူ့ကို အရင်နေရာမှာပဲ ခွက်တစ်လုံးရှေ့ချပြီး ထိုင်နေတာကို တွေ့ရပြန်တယ်။ ကျွန်တော် အရင်ရက်ကလိုပဲ ထမင်းတစ်ထုတ် အမြန်ဝယ်ပြီး သူ့ဆီသွားလိုက်တယ်။ သူ့ကို ထမင်းထုတ်ပေးရင်း ကျွန်တော်သိချင်တာကို မေးမြန်းကြည့်လိုက်တယ်။
ဦးလေးကို ကြည့်ရတာ အရင်က ချမ်းသာခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ အဲဒါ မှန်ရဲ့လား ခင်ဗျ
ဟင် ဒါဆို အခု ဘာဖြစ်လို့ ဆင်းရဲသွားရတာလဲဗျ။ ဦးလေးဟာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လောင်းကစားလုပ်ပြီး ကုန်သွားလို့လား၊ စီးပွားရေးလုပ်တာ ရှုံးသွားလို့လား။ သားသမီးတွေ နှိပ်စက်လိုက်လို့လား
မင်း ပြောတာတွေ တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်
ဒါဆို ဦးလေး ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝရောက်နေခဲ့ရတာလဲဗျ
ငါ လူတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ ဒီဘဝရောက်လာရတာပါ
ဗျာ၊ လူတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ ဒီဘဝရောက်လာရတယ် ဟုတ်လား။ ကျွန်တော် နားမလည်လို့ ရှင်းပြပေးပါလား”
လူကြီးက ဆွေးမြေ့တဲ့ လေသံနဲ့ ခုလို ရှင်းပြပါတယ်
ငါဟာ အရင်က အတော်လေး ချမ်းသာခဲ့တယ်။ အိမ်ထောင်မရှိ လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ပါ။ ငါ့မှာ ကောင်းတဲ့ အကျင့်လို့ ပြောရမလား၊ မကောင်းတဲ့ အကျင့်လို့ ပြောရမလား မသိဘူး။ ငါဟာ ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ လူတွေ ငါ့ဆီလာပြီး အကူအညီတောင်းရင် ငါ ဘယ်တော့မှ မငြင်းဘူး။ သူတို့လိုသလောက် ပိုက်ဆံတွေ ပေးပြီး ကူညီတယ်။
ငါဟာ အမြဲကူညီတတ်တယ်ဆိုတာ ကြားတော့ အကူအညီတောင်းသူတွေလည်း အတော်များလာတယ်။ ငါ ပိုက်ဆံပေးလိုက်လို့ သူတို့ပျော်သွားတာကို မြင်ရင် ငါလည်း စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါ့ပိုက်ဆံတွေကလည်း အပေးပဲရှိပြီး အရမရှိတော့ နောက်ဆုံး ကုန်သွားတာပေါ့ကွာ။ ငါလည်း ပိုက်ဆံမရှိတော့ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ အိမ်ကို ရောင်းပြီး စားသောက်ရတယ်။ နောက်ဆုံး စားစရာမရှိတော့ ခုလို လမ်းဘေးရောက်လာတာပေါ့ကွာ
ဦးလေး၊ ခုလို ဖြစ်တဲ့အတွက် နောင်တမရဘူးလားမရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ တစ်ခုရှိတယ်
ဘာ ကို စိတ် မ ကောင်း ဖြစ်တာ လဲ ဦး လေး
အေး ကွာ၊ ငါ လူ တွေ ကို သ နား လို့ ငါ့ ကိုယ် မှာ ဝတ်ထားတဲ့ အ င်္ကျီ ကို ချွတ် ပြီး ပေး လိုက် တယ်။ ငါ လို အပ် နေ တဲ့ အ ချိန် မှာ အ င်္ကျီ လက် လေးတစ် ဖက် ကို တောင် မ ပေး ကြ ဘူး ကွာ။ ငါ့ အ တွေ့အ ကြုံ က နေ မင်း ကို အ ကြံ တစ်ခု ပေး မယ် ကွာ မင်း အိမ်တစ်လုံး ဆောက် ပြီး နေ စ ရာ မရှိ သူ တွေ ကို လာ နေ ခိုင်း လိုက် ပါ ဒါ ပေ မဲ့ မင်း အိမ် ဆောက် နေ တုန်း မှာ အုတ် ခဲ တွေ လာ တောင်း ရင် မ ပေး လိုက်ပါ နဲ့။ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆိုတော့ မင်း မှာ အုတ် ခဲ မ ရှိ တော့ လို့ အိမ် မ ဆောက် နိုင်ရင် မင်း မှာ နေ စ ရာ မ ရှိ ဖြစ်သွား မယ်
ကျွန် တော် လည်း ရ ထား ဝင်လာ လို့ ရ ထား ပေါ် အ မြန် ပြေး တက် လိုက် တယ်။ လူ ကြီး ရဲ့ စ ကား ကို နား ထဲ မှာ ကြား ယောင် ရင်း ခု လို စဉ်းစား နေ မိ တယ်
ဟုတ် ပါ တယ် အ ကူ အ ညီလို အပ် နေ သူ တွေ ကို ကူ ညီ တယ် ဆို တာ အ လွန် မွန်မြတ် တဲ့ အ လုပ် ပါ ဒါ ပေ မဲ့ ကူ ညီ ရင်း ကူ ညီ ရင်း နဲ့ မိ မိကိုယ် တိုင် မွဲ သွား ရင် လည်း မ ဟုတ် သေး ပါ ဘူး ဒါကြောင့် ကူ ညီ ရင်း နဲ့ မ မွဲ အောင် မိ မိကိုယ် ကို ပြည့် စုံ တဲ့ ကြီး ပွား ချမ်း သာ သူ တစ် ယောက် အရင် ဖြစ် အောင် လုပ် သင့် တယ်
အ ခု ဘီ လ်ဂိတ်၊ မာ့ ခ်ဇူကာ ဘတ် တို့ လို့ က မ္ဘာ မှာ အ ချမ်း သာ ဆုံး ဘီ လျံ နာသူ ဌေး ကြီး တွေ ဖြစ် လာ ပြီး ဒေါ်လာ ဘီ လျံ နာ ပေါင်း များ စွာကို လှူ တန်း ပေး နေ သ လိုပေါ့။ ဒီ လို မှ မ ဟုတ် ဘဲ ဝေသ န္တရာ မင်း ကြီး လို ဆင် ဖြူတော် ပါ မ ချန် စည်း စိမ် ပြုတ် လှူ တန်း နိုင် ရင် တော့ အ ကောင်းဆုံး ပေါ့ ဗျာ။အင် တာ နက်မှာ ဖတ် ရ တဲ့ A limit of your kindness ဆောင်း ပါး လေး ကို မှီ ငြမ်း ရေး ထား တာ ပါ။
Source – ဗန်း မော် သိန်း ဖေ(၂၁-၀၆-၂၀၁၉)
ကြှနျတေျာ့ကားပကျြသှားလို့ ကားပွငျဖို့ ဝပျရှော့ကို ပို့ထားလိုကျရတယျ။ ဒါကွောငျ့ မွို့ပတျရထားစီးပွီး အလုပျသှားဖို့ အိမျနဲ့ သိပျမဝေးတဲ့ ဘူတာရုံကို လမျးလြှောကျသှားလိုကျတယျ။
ဘူတာရောကျတော့ ရထားလာဖို့ စောငျ့နတေုနျး ဘူတာရုံပလကျဖေါငျးပျေါမှာ ခှကျလေးတဈလုံး ရှခေ့ပြွီး ငုတျတုပျလေး ထိုငျနတေဲ့ အသကျ ၅၀ အရှယျ လူကွီးတဈယောကျကို သတိထားမိလိုကျတယျ။ သူဟာ အဝတျအစား နှမျးနှမျးပါးပါးကို ဝတျထားတယျ။ သူ့မကျြနှာမှာ ထမငျးအလှနျဆာနပေုံ ပျေါနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရုပျရညျဟာ သနျ့ပွနျ့လို့ သူတောငျးစားတဈယောကျ မဟုတျလောကျဘူးလို့ ကြှနျတျောတှကျမိတယျ။
ကြှနျတျောလညျး သူ့ကို သနားတာနဲ့ ဘူတာရုံဘေးက ထမငျးတဈထုတျဝယျပွီး သူ့ဆီ သှားပေးလိုကျတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ရထားဝငျလာလို့ သူ့ကို စကားမပွောနိုငျဘဲ လကျထဲက ထမငျးထုတျကို ပေးပွီး ရထားပျေါ အမွနျတကျလိုကျတယျ။ ကြှနျတျော လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ သူဟာ ကြှနျတေျာ့ကို အလှနျကြေးဇူးတငျတဲ့ မကျြနှာနဲ့ လှမျးကွညျ့နတောကို မွငျလိုကျရတယျ။ ကြှနျတျော သူ့အကွောငျးကို စဉျးစားရငျး ညက တျောတျောနဲ့ အိပျမရဘူး။
ဒီလူဟာ သူတောငျးစား မဟုတျနိုငျဘူး။ သူ့ရုပျရညျကွညျ့ရတာ အရငျက ခမျြးသာခဲ့တဲ့ လူတဈယောကျဖွဈနိုငျတယျ၊ သူ အခု ဘာကွောငျ့ တောငျးစားနရေတာလဲဆိုတာကို သိခငျြနတေယျ
နောကျနမှေ့ာ ကြှနျတျောဟာ ပုံမှနျအလုပျသှားခြိနျထကျစောပွီး အိမျက ထှကျခဲ့တယျ။ အရငျနကေ့ တှခေဲ့တဲ့ အဲဒီလူကွီးနဲ့ စကားပွောခငျြလို့ပါ။ သူ့ကို အရငျနရောမှာပဲ ခှကျတဈလုံးရှခေ့ပြွီး ထိုငျနတောကို တှရေ့ပွနျတယျ။ ကြှနျတျော အရငျရကျကလိုပဲ ထမငျးတဈထုတျ အမွနျဝယျပွီး သူ့ဆီသှားလိုကျတယျ။ သူ့ကို ထမငျးထုတျပေးရငျး ကြှနျတျောသိခငျြတာကို မေးမွနျးကွညျ့လိုကျတယျ။
ဦးလေးကို ကွညျ့ရတာ အရငျက ခမျြးသာခဲ့တဲ့ လူတဈယောကျဖွဈခဲ့မယျလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ အဲဒါ မှနျရဲ့လား ခငျဗြ
ဟငျ ဒါဆို အခု ဘာဖွဈလို့ ဆငျးရဲသှားရတာလဲဗြ။ ဦးလေးဟာ ရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို လောငျးကစားလုပျပွီး ကုနျသှားလို့လား၊ စီးပှားရေးလုပျတာ ရှုံးသှားလို့လား။ သားသမီးတှေ နှိပျစကျလိုကျလို့လား
မငျး ပွောတာတှေ တဈခုမှ မဟုတျပါဘူးကှယျ
ဒါဆို ဦးလေး ဘာဖွဈလို့ ဒီဘဝရောကျနခေဲ့ရတာလဲဗြ
ငါ လူတှကေို စိတျခမျြးသာစခေငျြလို့ ဒီဘဝရောကျလာရတာပါ
ဗြာ၊ လူတှကေို စိတျခမျြးသာစခေငျြလို့ ဒီဘဝရောကျလာရတယျ ဟုတျလား။ ကြှနျတျော နားမလညျလို့ ရှငျးပွပေးပါလား”
လူကွီးက ဆှေးမွတေဲ့ လသေံနဲ့ ခုလို ရှငျးပွပါတယျ
ငါဟာ အရငျက အတျောလေး ခမျြးသာခဲ့တယျ။ အိမျထောငျမရှိ လူပြိုကွီးတဈယောကျပါ။ ငါ့မှာ ကောငျးတဲ့ အကငျြ့လို့ ပွောရမလား၊ မကောငျးတဲ့ အကငျြ့လို့ ပွောရမလား မသိဘူး။ ငါဟာ ငှကွေေးအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ လူတှေ ငါ့ဆီလာပွီး အကူအညီတောငျးရငျ ငါ ဘယျတော့မှ မငွငျးဘူး။ သူတို့လိုသလောကျ ပိုကျဆံတှေ ပေးပွီး ကူညီတယျ။
ငါဟာ အမွဲကူညီတတျတယျဆိုတာ ကွားတော့ အကူအညီတောငျးသူတှလေညျး အတျောမြားလာတယျ။ ငါ ပိုကျဆံပေးလိုကျလို့ သူတို့ပြျောသှားတာကို မွငျရငျ ငါလညျး စိတျခမျြးသာတယျ။ ဒါပမေဲ့ ငါ့ပိုကျဆံတှကေလညျး အပေးပဲရှိပွီး အရမရှိတော့ နောကျဆုံး ကုနျသှားတာပေါ့ကှာ။ ငါလညျး ပိုကျဆံမရှိတော့ ရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ အိမျကို ရောငျးပွီး စားသောကျရတယျ။ နောကျဆုံး စားစရာမရှိတော့ ခုလို လမျးဘေးရောကျလာတာပေါ့ကှာ
ဦးလေး၊ ခုလို ဖွဈတဲ့အတှကျ နောငျတမရဘူးလားမရပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ စိတျမကောငျးဖွဈမိတာ တဈခုရှိတယျ
ဘာ ကို စိတျ မ ကောငျး ဖွဈတာ လဲ ဦး လေး
အေး ကှာ၊ ငါ လူ တှေ ကို သ နား လို့ ငါ့ ကိုယျ မှာ ဝတျထားတဲ့ အ င်ျကြီ ကို ခြှတျ ပွီး ပေး လိုကျ တယျ။ ငါ လို အပျ နေ တဲ့ အ ခြိနျ မှာ အ င်ျကြီ လကျ လေးတဈ ဖကျ ကို တောငျ မ ပေး ကွ ဘူး ကှာ။ ငါ့ အ တှအေ့ ကွုံ က နေ မငျး ကို အ ကွံ တဈခု ပေး မယျ ကှာ မငျး အိမျတဈလုံး ဆောကျ ပွီး နေ စ ရာ မရှိ သူ တှေ ကို လာ နေ ခိုငျး လိုကျ ပါ ဒါ ပေ မဲ့ မငျး အိမျ ဆောကျ နေ တုနျး မှာ အုတျ ခဲ တှေ လာ တောငျး ရငျ မ ပေး လိုကျပါ နဲ့။ ဘာ ကွောငျ့ လဲ ဆိုတော့ မငျး မှာ အုတျ ခဲ မ ရှိ တော့ လို့ အိမျ မ ဆောကျ နိုငျရငျ မငျး မှာ နေ စ ရာ မ ရှိ ဖွဈသှား မယျ
ကြှနျ တျော လညျး ရ ထား ဝငျလာ လို့ ရ ထား ပျေါ အ မွနျ ပွေး တကျ လိုကျ တယျ။ လူ ကွီး ရဲ့ စ ကား ကို နား ထဲ မှာ ကွား ယောငျ ရငျး ခု လို စဉျးစား နေ မိ တယျ
ဟုတျ ပါ တယျ အ ကူ အ ညီလို အပျ နေ သူ တှေ ကို ကူ ညီ တယျ ဆို တာ အ လှနျ မှနျမွတျ တဲ့ အ လုပျ ပါ ဒါ ပေ မဲ့ ကူ ညီ ရငျး ကူ ညီ ရငျး နဲ့ မိ မိကိုယျ တိုငျ မှဲ သှား ရငျ လညျး မ ဟုတျ သေး ပါ ဘူး ဒါကွောငျ့ ကူ ညီ ရငျး နဲ့ မ မှဲ အောငျ မိ မိကိုယျ ကို ပွညျ့ စုံ တဲ့ ကွီး ပှား ခမျြး သာ သူ တဈ ယောကျ အရငျ ဖွဈ အောငျ လုပျ သငျ့ တယျ
အ ခု ဘီ လျဂိတျ၊ မာ့ ချဇူကာ ဘတျ တို့ လို့ က မ်ဘာ မှာ အ ခမျြး သာ ဆုံး ဘီ လြံ နာသူ ဌေး ကွီး တှေ ဖွဈ လာ ပွီး ဒျေါလာ ဘီ လြံ နာ ပေါငျး မြား စှာကို လှူ တနျး ပေး နေ သ လိုပေါ့။ ဒီ လို မှ မ ဟုတျ ဘဲ ဝသေ န်တရာ မငျး ကွီး လို ဆငျ ဖွူတျော ပါ မ ခနျြ စညျး စိမျ ပွုတျ လှူ တနျး နိုငျ ရငျ တော့ အ ကောငျးဆုံး ပေါ့ ဗြာ။အငျ တာ နကျမှာ ဖတျ ရ တဲ့ A limit of your kindness ဆောငျး ပါး လေး ကို မှီ ငွမျး ရေး ထား တာ ပါ။
Source – ဗနျး မျော သိနျး ဖေ(၂၁-၀၆-၂၀၁၉)
ကွာသပတေး သားသမီးမြား အတှကျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ တဈလလုံးစာ ဗဒေဟောစာတမျးနှငျ့ ယတွာမြား..
မနက်ဖြန်လှူမည့် လိမ္မော်သီး အဘအတွက်တဲ့ အလှူငွေ ၅၅သိန်း ၂ သောင်းကျပ် နှင့် ပါဝင်လှူဒါန်းသူများစရင်း
အဘိုးကို​တှတေ့ာနဲ့ အဘိုးကိုဖကျ​ကာ ငိုခဲ့တဲ့ ဆိုငျ​နှနျ​
လူကုနျကူးခံရတဲ့ မိနျးကလေးမှ ကိုယျတိုငျကွုံတှခေဲ့ရတာတဈခြို့ ပွောပွ
ရေချိုးခန်းထဲမှာ နေဒွေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ အွန်လိုင်းမှာပျံ့နှံ့နေတဲ့အပေါ် မော်ဒယ် နိုးထက်ထက်နိုင် ပြန်ရှင်း (ရုပ်သံ)
နေ့စဉ်သောက်နေကျရေထဲကို သခွားသီးးလေးပဲထည့်ပြီး သောက်ကြည့်ပါ…
Khitthit Myanmar is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.
Copyright © 2020 | Powered by Khitthit Myanmar